मड्रिडमा सोलारीको सम्भावना छैन !! को फर्किएला मौरिन्हो, जिदान कि अन्य कोहि ? - Experience Best News from Nepal
मड्रिडमा सोलारीको सम्भावना छैन !! को फर्किएला मौरिन्हो, जिदान कि अन्य कोहि ?
आइतबार रातिको खेलमा रियल भायाडोलिडले २९ औं मिनेटमा बनाएको अग्रता पाँच मिनेट मात्रै रहन सक्यो । ३४ औं मिनेटमा भरानेले गोल गरेर बराबरी बनाएको खेलमा दोस्रो हाफमा बेन्जेमाले दुई र मोडरिकले एक गोल गरे ।
कोपा डेल रेको सेमिफाइनलमा बार्सिलोनसँग ३–० ले, ला लिगामै बार्सिलोनासँगै १–० हारेपछि च्याम्पियन्स लिगमा आयाक्ससँग ४–१ ले हारेर अन्तिम १६ बाटै बाहिरिएको रियल मड्रिड दबावमा थियो ।
प्रशिक्षक सोलारी क्लबमा कहिलेसम्म रहलान् भन्ने प्रश्न उठिरहेका थिए । यस्तोमा भायाडोलिडविरुद्ध निकालेको जितले पनि सोलारीलाई क्लबमा जोडिराख्न भने सघाएको देखिँदैन ।
जारी सिजन प्रशिक्षकको रणनीतिका कारण खराब प्रदर्शन भइरहेको निक्यौलमा मड्रिड अध्यक्ष फ्लोरेन्टिनो पेरेजले जुलेन लोपेटेगीलाई हटाएर सान्टियागो सोलारीलाई ल्याएका थिए । सोलारीले सुरुमा विभिन्न प्रतियोगितामा लगातार चार खेल जितेर मड्रिडमा प्रभाव जमाए तर, धेरै समय रहन सकेन ।
ला लिगामा मात्रै होइन, कोपा डेलरे र लगातार तीन पटक जितेको च्याम्पियन्स लिगमा पनि मड्रिडले सोचेजस्तो गर्न सकेन । केही समयमा लागि भनिएका सोलारीमाथि मड्रिडले सुरुका केही हप्ता जुन विश्वास देखाएको थियो, त्यो टुटिसकेको छ । सोलारीले आफ्नो कामलाई उत्कृष्ट बनाउँदै जिनेदिने जिदानको बाटो पछ्याउँदै छन् भन्ने तारिफ भइरहे पनि उनी खरो उत्रिन सकेनन् ।
सोलारीले सुरुका केही हप्ता क्लबमा राम्रो प्रभाव पार्न सके । मेलिला, भायाडोलिड, प्लेजन र सेल्टाविरुद्ध जित निकालेर चम्कन थालेका उनका लागि दोस्रो चरणको परीक्षा भने सुखद भएन । सेल्टाविरुद्धको जितपछि नै उनी २०२१ जुन ३० सम्मका लागि प्रशिक्षकमा स्थायी नियुक्त भएका थिए ।
भायाडोलिडसँगको खेलपछि प्रशिक्षकको जागिरमा कहिलेसम्म रहिएला भनेर सोधिएको प्रश्नमा सोलारीले केही बताउन सकेनन् । उनले भने, ‘म यो प्रश्नको जवाफ दिनै सक्दिन ।’
‘यो हाम्रो लागि निकै कठिन हप्ता हो । त्यसैले भायाडोलिडविरुद्धको खेल अलि भावनात्मक थियो । विपक्षीले निकै राम्रो खेलेका हुन् तर हाम्रा खेलाडीले गोल परिणत गर्न सके’ उनले भने ।
सोलारीको स्थानमा रियल मड्रिडकै पूर्वप्रशिक्षक जोसे मोउरिन्होलाई ल्याउने तयारी भइरहेको छ । २०१० देखि २०१३ सम्म मड्रिड क्लब सम्हालेका मोउरिन्होले त्यसपछि इंग्लिस क्लब चेल्सी र म्यानचेस्टर युनाइटेडको प्रशिक्षक भएर काम गरे ।
प्रिमियर लिगमा म्यानचेस्टर युनाइटेडको खराब प्रदर्शनपछि हटाइएका मोउरिन्होमाथि नै रियल मड्रिड अध्यक्ष फ्लोरेन्टिनो पेरेजले विश्वास बढाएका छन् ।
बेन्जिमाको दुई गोलले हारबाट जोगियो रियल !! बेन्जिमा ह्याट्रिक गर्न चुके
लेभान्टेमाथि रियल मड्रिडको कठिन जित !
जिदान कसरी एक सफल प्रशिक्षक, रियल मड्रिडमा उनको भूमिका कस्तो ??
कोपा इएल क्लासिकोको पूर्ण टिकेट २ दिन अगाबै बिक्यो !! कहिले हुदै छ रियल विरुद्ध बार्सिलोनाको खेल??
क्लबले बेवास्था गरे नभासले रियल छोड्ने चेतावनी
२३ सदस्य भित्र समेत परेनन् यी ८ स्टार खेलाडी, कोपा अमेरिका जित्ने ब्राजिलको दाउ